တရုတ်နိုင်ငံက တတိယမြောက် လေယာဉ်တင်သင်္ဘောရေချ - Xinhua News Agency
တရုတ်နိုင်ငံ အရှေ့ပိုင်း ရှန်ဟိုင်းမြို့တွင် တရုတ်နိုင်ငံ၏ တတိယမြောက် ဖူကျန့် လေယာဉ်တင်သင်္ဘော ရေချခြင်းအခမ်းအနားအား ဇွန် ၁၇ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
ရှန်ဟိုင်း၊ ဇွန် ၁၇ ရက် (ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံသည် တတိယမြောက် လေယာဉ်တင်သင်္ဘော ဖူကျန့် (Fujian) ကို ရှန်ဟိုင်းမြို့၌ ဇွန် ၁၇ ရက်က ရေချခဲ့သည်။ ဖူကျန့်ပြည်နယ်၏ အမည်ပေးထားသော အဆိုပါသင်္ဘောအား တရုတ်နိုင်ငံက ဒီဇိုင်းထုတ်လုပ်ကာ တည်ဆောက်ထားခြင်းဖြစ်သည်။
အဆိုပါ သင်္ဘောသစ်အား နံနက် ၁၁ နာရီခန့်က ရေချခြင်းအခမ်းအနားစတင်ချိန်၌ပင် ရေပြင်သို့ချခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီ ဗဟိုကော်မတီ နိုင်ငံရေးဗျူရို အဖွဲ့ဝင်နှင့် ဗဟိုစစ်ကော်မရှင် (CMC) ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ Xu Qiliang က သင်္ဘောအား လက်ခံသော ရေတပ်ယူနစ်ထံ အမည်ပေးအပ်ခြင်းအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် ပေးအပ်ခဲ့သည်။
CMC ၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဖူကျန့်သည် သင်္ဘောကိုယ်ထည်နံပါတ် ၁၈ ပေးအပ်ခြင်းခံခဲ့ရသည်။
အဆိုပါ သင်္ဘောသည် တရုတ်နိုင်ငံ၏ ပထမဆုံး ပြည်တွင်ထုတ် လေယာဉ်တင်သင်္ဘောဖြစ်ပြီး သင်္ဘောပေါ်မှ လေယာဉ်များကို လေထဲသို့ပင့်တင်ပေးသောကိရိယာ အသုံးပြုထားခြင်းဖြစ်သည်။ ဝန်အားအပြည့် ရေထုအလေးချိန် တန်ပေါင်း ၈၀,၀၀၀ ကျော်သယ်ဆောင်နိုင်သော အဆိုပါ သင်္ဘောသည် လျှပ်စစ်သံလိုက် လေယာဉ်ပင့်တင်ပေးသောကိရိယာများ တပ်ဆင်ထားပြီး ကိရိယာများကို ဖမ်းယူနိုင်ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ သင်္ဘောသစ်သည် ကြိုးဆိုင်းဖြင့် စမ်းသပ်ခြင်းများနှင့် ပင်လယ်ပြင်လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုများကို စီစဉ်ထားသည့်အတိုင်း ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်သည်။ (Xinhua)
Source: XinhuaEditor: huaxia2022-06-17 13:25:45
SHANGHAI, June 17 (Xinhua) — China launched its third aircraft carrier, the Fujian, in Shanghai on Friday. The carrier, named after Fujian Province, was completely designed and built by China.
It is China’s first domestically-made carrier that uses catapults. Withafull-load displacement of more than 80,000 tonnes, the carrier is equipped with electromagnetic catapults and arresting devices.
The new carrier will conduct mooring tests and sea trials as scheduled. ■
Photo : Photo taken on June 17, 2022 shows the launching ceremony of China’s third aircraft carrier, the Fujian, in east China’s Shanghai. The carrier, named after Fujian Province, was completely designed and built by the country. (Xinhua/Li Gang)